SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aukan Aymara Baoule Batak (Toba) Bulgarian Catalan Cebuano ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Javanese Kamba Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Lamba Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Malagasy Maltese Mam Maya Mazatec (Huautla) Mizo Moore Myanmar Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Saramaccan Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Venda Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Ungapindura sei mubvunzo uyu? Vanhu vakawanda vanofunga kuti Mwari anoda kuti vanhu varwe hondo. Vanoti Mwari akamboudza vamwe vanhu vaimunamata munguva dzekare kuti varwe hondo; uye ndizvowo zvinotaurwa neBhaibheri. Asi vamwewo vanonzwisisa kuti Mwanakomana waMwari Jesu akadzidzisa vateveri vake kuti vade vavengi vavo. (Mateu 5:43, 44) Saka vanoti Mwari akazochinja maonero aanoita hondo uye kuti mazuva ano haachatenderi vanhu kurwa hondo.
Unofungei? Mwari anoda kuti vanhu varwe hondo here? Kana zvakadaro anotsigira ani muhondo dziriko mazuva ano? Kuziva mhinduro dzemibvunzo iyi, kuchakubatsira kuongorora maonero ako nemafungiro ako panyaya yehondo. Somuenzaniso, kana ukaziva kuti Mwari anoda kuti vanhu varwe hondo uye kuti ari kutsigira divi rako muhondo, zvichida waizofara kuti maonero ako panyaya yehondo akanaka, wova nechivimbo chokuti masoja enyu achakunda muhondo. Ukuwo waizonzwa sei kana ukaziva kuti Mwari ari kutsigira vavengi vako muhondo? Zvichida waizofunga kaviri.
Nyaya iyi haisi yokutamba nayo. Kuziva kuti Mwari anoona sei hondo kunogona kuchinja maonero aunomuita. Kana uri mumwe wemamiriyoni evanhu vakarwadziswa chaizvo nehondo, zviri pachena kuti unoda kuziva mhinduro dzemibvunzo iyi: Mwari ndiye anokurudzira kuti hondo dzivepo sezvinofungwa nevamwe here? Anofarira kuti vanhu vatambure nehondo here? Haana kana basa nekurwadziswa kunoitwa vanhu muhondo here?
Unogona kushamisika kana ukaziva kuti mhinduro dzeBhaibheri dzakasiyana zvikuru nemafungiro ose iwayo. Uyewo, kubvira kare maonero anoita Mwari hondo haana kuchinja. Ngationei kuti Bhaibheri rinoti Mwari aiona sei hondo kare kare uyewo kuti ainge ava kuiona sei pakazouya Jesu panyika. Izvozvo zvichatibatsira kuziva kuti Mwari ari kuona sei hondo mazuva ano uye kuti hondo dzicharamba dziripo here.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Mwari Anoona Sei Hondo?